ESI GBANYỤỌ MGBASA OZI NA YOUTUBE - ESI MEE - 2019
Esi gbanyụọ mgbasa ozi na YouTube
YouTube bụ ọrụ ntinye vidio a ma ama nke ụwa nke nwere nnukwu ọbá akwụkwọ vidio. Nke a bụ ebe ndị ọrụ na-ele vidiyo ha kacha amasị, vidiyo nkuzi, ihe ngosi TV, vidio egwú, na ihe ndị ọzọ. Naanị ihe na-ebelata ogo ojiji nke ọrụ ahụ bụ mgbasa ozi, nke, mgbe ụfọdụ, a gaghị echefu ya.
Taa, anyị na-ele ụzọ kachasị mfe iji wepụ mgbasa ozi na YouTube, na-enyere aka nke usoro ihe omume Adguard. Usoro a abughi nani ad mgbasaozi adighi nma maka ihe nchọgharị obula, kamakwa oru kachasi nma iji chebe nchedo na Intanet site na ebe kachasi elu nke ebe a na-achoputa ya, a ga-egbochi oghere ya.
Esi gbanyụọ mgbasa ozi na YouTube?
Ọ bụrụ na ọ bụghị ogologo oge gara aga, mgbasa ozi na YouTube adịkarịghị, ma taa ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na vidiyo nwere ike ime n'enweghị ya, egosipụta ya na mmalite na usoro nlele. Ị nwere ike iwepu ụdị mkparịta ụka ahụ na nke doro anya na ọdịnaya na-enweghị isi dịkarịa ala ụzọ abụọ, anyị ga-ekwukwa banyere ha.
Usoro 1: Ad Blocker
Enweghị ọtụtụ ụzọ dị irè nke igbochi mgbasa ozi na ihe nchọgharị ahụ, otu n'ime ha bụ AdGuard. Bibie mgbasa ozi na YouTube na ya nwere ike ịbụ ndị a:
Ọ bụrụ na ị wụnyebeghị Adguard, wee budata ma wụnye usoro a na kọmputa gị.
Na-agba window window, ọnọdụ ga-egosipụta na ihuenyo. "Nchedo nyeere". Ọ bụrụ na ị na-ahụ ozi ahụ "Nchedo", wee megharịa ọbụla na ọkwa a ma pịa ihe na-egosi. "Kwado Nchedo".
Ihe omume a na-arụsi ọrụ ike ugbu a, nke pụtara na ị nwere ike ịlele ihe ịga nke ọma site na ịmegharị mgbanwe na saịtị YouTube. Kedu ụdị vidio ị na-agba, mgbasa ozi agaghị emekpa gị ahụ ọzọ.
Onye na-echebe na-enye ndị ọrụ ụzọ kachasị dị irè isi gbochie mgbasa ozi. Biko mara na agbachitere mgbasa ozi ọ bụghị naanị na nchọgharị na saịtị ọ bụla, kamakwa n'ọtụtụ mmemme arụnyere na kọmputa gị, dịka ọmụmaatụ, na Skype na uTorrent.
Hụkwa: Mgbakwunye iji gbochie mgbasa ozi na YouTube
Usoro 2: Deba aha na YouTube Premium
AdGuard, nke a na-atụle na usoro mbụ, akwụ ụgwọ, ọ bụ ezie na ọ bụ ego. Tụkwasị na nke ahụ, o nwere ihe ọzọ n'efu - AdBlock, - ọ na-ejikwa ọrụ ahụ n'ihu anyị. Mana olee ihe ị ga - eme ọ bụghị naanị ile YouTube anya n'enweghị mgbasa ozi, mana inwe ike igwu vidio na ndabere na ibudata ha maka nlele ntanetị (na ngwa ọrụ gam akporo na iOS)? Ihe a nile na-enye gị ohere itinye ndenye aha na YouTube Premium, nke na-adịbeghị anya dị ka ndị bi na ọtụtụ mba CIS.
Hụkwa: Otu esi budata vidiyo site na YouTube na ekwentị gị
Ka anyị gwa gị otu ị ga-esi denye aka na akụkụ ntanetị nke Google vidio vidio iji nwee mmasị na njirimara ya niile, ma echefu banyere mgbasa ozi iwe.
Mepee vidio YouTube na ihe nchọgharị ma pịa bọtịnụ òké aka ekpe (LMB) na akara ngosi nke profaịlụ gị nke dị na aka nri aka nri.
Na menu na-emepe, họrọ "Ndebanye aha akwụ ụgwọ".
Na ibe "Ndebanye aha akwụ ụgwọ" pịa njikọ ahụ "Nkọwa"dị na ngọngọ YouTube adịchaghị. N'ebe a ị ga-ahụ ụgwọ nke ndebanye aha kwa ọnwa.
Na peeji na-esonụ, pịa bọtịnụ ahụ. "Ịdenye aha na YouTube Premium".
Otú ọ dị, tupu i mee nke a, anyị na-akwado gị ka ị mara onwe gị na ihe niile ọrụ ahụ nwere.
Iji mee nke a, dị nnọọ ka ịpịgharịa na ibe. Ya mere, nke a bụ ihe anyị ga - enweta:
Enweghi mgbasa ozi;
Ọnọdụ agaghị aga;
Egwuregwu Music YouTube;
Ihe mmalite YouTube.
Biko gaa ozugbo na ndenye aha gị, tinye ozi ịgba ụgwọ gị - họrọ kaadị echekwara na Google Play ma ọ bụ jikọta ọhụrụ. N'ịkọwapụta ozi dị mkpa maka ọrụ ịkwụ ụgwọ, pịa bọtịnụ ahụ. "Zụrụ". Ọ bụrụ na kpaliri, tinye paswọọdụ akaụntụ Google gị iji nyochaa.
Rịba ama: Ọnwa mbụ nke Ndebanye aha Ntanye bụ n'efu, ma a ghaghị ịnweta ego na kaadị eji akwụ ụgwọ. A choro ha ka ha wepu ya na nloghachi nke ugwo ule.
Ozugbo a kwụrụ ụgwọ ahụ, bọtịnụ YouTube a maara ga-agbanwe na adịchaghị, nke gosipụtara ọnụnọ nke ndenye aha.
Site na oge a, ị nwere ike ile YouTube n'enweghị mgbasa ozi na ngwaọrụ ọ bụla, ọ bụrụ kọmputa, smartphone, mbadamba ma ọ bụ TV, yana iji atụmatụ ndị ọzọ dị na akaụntụ ebighi ebi anyị depụtara n'elu.
Ugbu a ị maara otú e si tufuo mgbasa ozi na YouTube. Jiri mmemme pụrụ iche ma ọ bụ nkwụnye mgbati maka nzube ndị a, ma ọ bụ nanị ịdenye aha na - ị ga - ekpebi, ma nhọrọ nke abụọ, na echiche nke anyị, na - adọrọ adọrọ ma na - atọ ụtọ. Anyị nwere olileanya na ihe a bara uru nye gị.